China Central Console & DC Drive IKhabhinethi ifektri abakhiqizi | Mingshuo
OL uchungechunge DC drive is ikakhulukazi esetshenziswa ukushayela DC motor, futhi kabanzi isicelo Welding tube isigayo umkhakha. Isekethe layo eliyingqayizivele lokulawula amandla kazibuthe lingaqinisekisa ijubane elibanzi elilawula ububanzi bezimoto zeDC. Ukuqina kwesekethe yedijithali yaso yedijithali ayikwazi ukwenza idrayivu ye-DC ibe nomsebenzi ozinzile namandla okulwa nokuphazamiseka kuphela, kepha futhi inesixhumi esibonakalayo esihle somsebenzisi esivumelana nokusebenza.Idrayivu ye-DC ifaka: imodyuli yokulawula ukuthakazelisa, isifunda esigcwele sokulawula i-digital DC.
IKhabinethi YeDc Drive
IKhabinethi yeDrayivu yeDrayivu inezichungechunge ezi-3: imodi yokukhuthaza ukulawula ikhompyutha, imodi yoqobo eyidijithali ye-Euro Drive nemodi yokwandiswa kwe-Euro Drive yedijithali yonke. Hlakulela isilawuli se-loop esiseduze samanje esinejubane, esinokufaneleka kwebanga lokulawulwa kwejubane elibanzi, ukusebenza okuhle kakhulu, ukuxhumana kwe-motors amaningi njll.
Le mishini phesheya isebenza ekukhanyeni kwezimboni, ukwenza iphepha, ipulasitiki, ipayipi nokushisela ithubhu, amakhemikhali, usimende njll.
I-Voltage grade: 460v / 230v Izinga lamanje: 100A ~ 3000A
Konke okwedijithali (uchungechunge lwe-Euro Drive)
Ingxenye #: OL-110A / 460V
Ingxenye #: OL-150A / 460V
Ingxenye #: OL-270A / 460V
Ukulawulwa kwejubane nokushayela kwe-DC motor, ukunikezwa kwamandla okuphezulu kwe-DC.
Design ukwakheka okuphelele
Idizayini yokuhlanganisa yedrayivu ye-DC enezici zesakhiwo esihlanganisiwe nosayizi omncane. Uhlobo loqobo noma uhlobo lohlobo lwesandiso luyazikhethela.
②.I-main loop thyristor isebenzisa i-radiator esebenza kahle kakhulu yokupholisa umoya evumelana nokufakwa nokugcinwa kwayo.
Ukwakheka kokuhambisana okujwayelekile kwe-electromagnetism, imisebe ye-electromagnetism ihlangabezana nezinga likazwelonke.
④.Idizayini yekhabhinethi evaliwe, ukuhlangabezana nezidingo ezinzima zemvelo esizeni.
System Uhlelo oluphelele lokulawula idijithali
①.Hlakulela 590DIGITAL uchungechunge umlawuli ogcwele wedijithali ukubona inhlamvu eqondile yokuvumelanisa ene-high control ngokunemba kwejubane lemoto nejubane lokuphendula ngokushesha.
Ipharamitha yokusebenza ye-motor isebenzisa isethingi yemenyu yedijithali, elula futhi evumelana ne-HMI enhle.
SupplyUkunikezwa kwamandla kunomsebenzi wokuvikela ophelele ngezinga lokusebenza elithembekile nelokuhluleka okuphansi.
Ukukhethwa kwemishini *
1.Khetha imodeli yedrayivu ye-DC njengamandla kagesi alinganisiwe namandla alinganisiwe wemoto ye-DC.
2. Idrayivu ye-DC idinga ukubekelela u-20% wekhasi lamandla.
Ikhonsoli ifinyelela ukulawulwa okukude nokulawulwa kwamandla we-solid-state HF welder, efakwe ne-LCD; futhi inezinkomba zamandla we-armature, amandla we-field ku-DC drive iKhabhinethi nezinkomba ze-DC voltage, DC yamanje ku-welder. umsebenzi wokulawula iluphu uyakhethwa.I-console inokwehluka kokuklanywa ngokuya ngezinhlobo ezahlukene nobungako bokufana kwekhabethe le-DC drive.
Langaphambilini Ukusakazwa Kwesistimu Yokupholisa Amanzi Athambile
Olandelayo: Umshini wokushisela we-China osebenza kahle kakhulu wase-China